၂၀၁၈ အတွင်းမှာ ခေါက်/ဖြန့် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Smartphone တွေကိုဖန်တီးတော့မယ့် Samsung! – AsiaApps
၂၀၁၈ အတွင်းမှာ ခေါက်/ဖြန့် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Smartphone တွေကိုဖန်တီးတော့မယ့် Samsung!
January 11, 2018 January 11, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on ၂၀၁၈ အတွင်းမှာ ခေါက်/ဖြန့် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Smartphone တွေကိုဖန်တီးတော့မယ့် Samsung!
Samsung အနေနဲ့ ခေါက်လိုက် ဖြန့်လိုက် ပြုလုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ smartphone တွေကို ၂၀၁၈ အတွင်းမှာစတင်ဖန်တီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းတစ်လုံးကိုခေါက်လိုက် ဖြန့်လိုက် ပြုလုပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် စိတ်ဝင်စားဖို့အတော်ကောင်းလှမှာပါ။
Samsung အနေနဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်နေ့က Las Vegas မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ CES (Consumer Electronic Show) 2018 မှာသူ့ရဲ့ချစ်လှစွာသော Customer တွေကို ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CES ဆိုတာကတော့ နည်းပညာအသစ်တွေဆုံစည်းပြသရာ ပွဲတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။
It is going to develop foldable displays by March and manufacture panels in September. It is planning to manufacture final products in November. It is assumed that Samsung Electronics will release actual foldable Smartphones in December or early next year.
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ foldable (ခေါက်လိုက် ဖြန့်လိုက် ပြုလုပ်အသုံးပြုနိုင်) တဲ့ဖုန်းကိုတော့ Samsung အနေနဲ့ ၂၀၁၈ မတ်လကစတင်ပြီး ဖန်တီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ရောက်ရှိရင်တော့ အနည်းငယ်စမ်းထုတ်ကြည့်မှာပါ။ ထုတ်ကုန်ကို အမှန်တကယ် ထုတ်မှာကတော့ နိုဝင်ဘာလ မှပါ။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ လက်ထဲကို (ဝယ်ရင်ပေါ့?) ဒီဇင်ဘာလကုန် (သို့) ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီအစောပိုင်းလောက်မှ ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
The device is expected to featurea7.3-inch flexible OLED display, folding which will make itasmartphone, while it would act asatablet in unfolded form.
Samsung ရဲ့ foldable ဖုန်းဟာ ၇.၃ လက်မအထိရှိနေပြီး OLED (organic light-emitting diode) display ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါက်ပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းဒီဇိုင်းဖြစ်နေပြီး ဖြန့်ပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Tablet ဒီဇိုင်းဖြစ်နေမှာပါ။ Device တစ်ခုတည်းကို ပုံစံနှစ်မျိုးပြောင်းပြီးအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် ဟန်ကျချက်ပါပဲ။
ဒီသတင်းသာကောလဟာလ မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နှစ်ကုန်နားလောက်မှာ Samsung ရဲ့ နည်းပညာအသစ် ဖုန်းလေးကိုစောင့်မျှော်နိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကပြောချင်တာကတော့ ပိုက်ဆံစုထားကြပါလို့!!
Android, New model, Samsung
တကယ့် သင်္ချာဆရာ တစ်ယောက် ဖုန်းထဲရောက်နေသလို ခံစားရမယ့် Photomath